Ukwahlulahlulwa | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: без рубрики
Ndingayifumana njani i-imeyile ngokusebenzisa inombolo yam yefowuni?
ezaposwa ngomhla 22.08.2017 28.08.2017
Uyifumana njani kwakhona imeyile usebenzisa inombolo yefowuni? ojamelene nale ngxaki ndibhalele! Ayondli mpendulo. Amakhonkco ashiyekile kule Lena. Ukuphosa kwimidlalo. Ukwenza ingqumbo ukuba ufuna ukubuyisa iphasiwedi, ...
Ndingayinxibelelana njani ne-Mail.ru inkxaso?
Ungaqhagamshelana njani nenkxaso yeMail.ru? Molo! ndicela undincede ndibuyise iphasiwedi, abahlaseli batshintsha yonke idatha. Ndizamile ukubuyisela ngenkonzo yenkxaso, kodwa bathi unolwazi oluncinci. Ndinga…
Njani kwi-avatar ukubeka ubungqina emtshatweni?
Ungamisela njani ingqina emtshatweni kwi-avatar ?! Cheers for gold, write in 4 comments, yiya kumash okanye sachet, cinezela f5 kwaye ukhethe ukuba ufuna kangakanani i-4 cheers yegolide, bhala ...
Iyiphi inombolo yokuthengiselana? Ndiyifumana phi na?
Ithini inombolo yentengiselwano, kwaye ndingayifumana phi? Molweni, niyifumana njani intlawulo, ndiyayazi inombolo yesiliphu. Molweni. utshintshele kwikhadi kwiYandex-mali. imali ishiyekile kodwa khange ifike ekhadini. ...
Indlela yokunika i Java Java kwi-Internet Explorer 8?
Sifuna uluhlu lwabo bonke abalinganiswa abangama-26 bomsebenzi "Woe from Wit"
Sifuna uluhlu lwabo bonke abalinganiswa abangama-26 emsebenzini "Woe from Wit" ngu-A. Griboyedov. Woe from Wit A comedy in four act in verse ACTING: Pavel Afanasyevich Famusov, Sofia, umphathi wendawo esemthethweni ...
Ndingayitshintsha njani idilesi yam imeyile?
Ndiyitshintsha njani idilesi ye-imeyile? Ungatshintsha kuphela iprofayile, kodwa i-imeyile ngokwayo, ngelishwa, ayinakutshintshwa. Yenza entsha, kodwa ungakhathazeki) Akukho dilesi yantoni? ukuba imeyile, qala enye ibhokisi yeposi 🙂 ...
Indlela yokubuyisela ama-imeyli angasuswa?
Ungayifumana njani kwakhona i-imeyile esusiweyo ??? Ngaphambi kokuba ubuyisele imiyalezo ecinyiweyo ngeposi, kufuneka ukhumbule ngokuchanekileyo ukuba ulwazi lwalususwe njani kwaye lwalufumaneka phi. Ke, ukuba idatha ikwezi folda, ...
Indlela yokwenza isibindi sefonti? I-html-tags esetyenziswayo. Andiqondi indlela yokuyisebenzisa.
ezaposwa ngomhla 21.08.2017 28.08.2017
Ndiyenza njani ifonti ibe nesibindi? Iimpawu ze-html ziyasetyenziswa. Andiqondi ukuba ndizisebenzisa njani. hmm aaaaa Italic Ngeethegi Uyawafaka umbhalo kumacala omabini, ngaloo ndlela uyenza ibonakale. Phakathi kweethegi kunye nesicatshulwa ...
Ndingayithumela umyalezo NGANYE?
ngaba kunokwenzeka ukuba uthumele ileta NGOKUPHELELEYO? Inyathelo lokuqala: siya kwindawo engaqhelekanga, umzekelo ikhefi ye-Intanethi Inyathelo lesibini: Ukuthumela ileta Indlela enye: Ukuthumela i-imeyile engaziwayo, ungabhalisa ibhokisi yemeyile entsha kwenye indawo, igama ...
Isampuli yesitifiketi sezonyango kufuneka sisebenze njani kumntla ongasentla sibheke njani?
ukuba isampulu yezatifikethi zonyango kufuneka ijongeke njani emsebenzini kumantla akude impendulo seyiphelelwe lixesha. ifom entsha yasemantla -302-n Irina luvela phi olu lwazi? ndixelele pliz kubaluleke kakhulu. Esi sisiqinisekiso sonyango ...
Iyintoni i-akhawunti yomsebenzisi?
ezaposwa ngomhla 20.08.2017 28.08.2017
Yintoni iakhawunti yomsebenzisi? Ingxelo eneakhawunti enika ingxelo malunga nomsebenzisi malunga nenkqubo ethile yekhompyuter. Njengezithethantonye kubomi bemihla ngemihla, iakhawunti yamagama eslang kunye neakhawunti anokusetyenziswa, ukusuka ...
Ndilibale igama lam lomsebenzisi kunye nephasiwedi. Ndingena njani iphepha?
Ndilibale igama lam lomsebenzisi kunye negama lokugqitha xa unxibelelana. Ungene njani kwiphepha? nge-imeyile Akukho nto. Ukuqala, yiya kwiphepha eliphambili lesiza ekunxibelelaneni, phantsi kwamabala apho ungangena khona ngemvume kunye negama lokugqitha - ...
indlela yokubuyisela ibhokisi leposi kwiposi.ru
ubuyisela njani ibhokisi yemeyile ngeposi.ru Umsebenzisi kufuneka ngokuzimeleyo abuyisele ibhokisi yakhe yemiyalezo kwisixhobo sakhe. Ndinganika kuphela amacebo. Funda ingcebiso apha ukuba akunakwenzeka ukubuyisela ukufikelela ngokwakho: http: //otvet.mail.ru/question/172719793 Ukufikelela ngeposi ...
Yintoni ukunyathela? yi-90% yemiyalezo ekwi "mpendulo" yokuTrola bubukrwada kwi-intanethi. Kwisigama se-Intanethi, i-troll ngumntu othumela imiyalezo ekrwada okanye evuselelayo kwi-Intanethi, umzekelo, kwingxoxo ...
yintoni ukuhlazeka? Le yinkqubo yokonakala kweempawu zento ekuhambeni kwexesha, ukubuyela umva, ukonakala kancinci kancinci, ukwehla, ukwehla komgangatho, ukutshabalalisa izinto ngenxa yempembelelo yangaphandle ngokwemithetho yendalo kunye nexesha. Ukuthotywa isidima,…
Luhlobo luni lomvuzo olunikezwa kwiAvataria ukuba uya kwii-100 iintsuku
Leliphi ibhaso elinikezwe kwi-Avatar ukuba ungena ngeentsuku ezili-100 abantu ndothukile .. bekukho inkqubo yokufumana igolide simahla! Ilula kakhulu! Kwaye akunzima konke konke! Ngokubanzi, amabhaso alungile ...
Usuku lonke ingubo ene-scapegoat engayi kuba nayo.
Imini yonke ihlatywa ngescapula esezantsi ukuba inokuba yintoni. Izifo apho kukho khona iintlungu phantsi kwegxalaba lasekhohlo: -Ukhokelo lwesisu sesilonda sisifo esibuhlungu esibonakaliswa kukuhamba rhoqo, ixesha lokuya, ukwanda komlinganiswa, ...
indlela yokwenza i-mail.ru kwikhasi lasekhaya kwi desktop
uyenza njani iposi.ru iphepha lasekhaya kwidesktop yakho Molo! Yenza iMail.Ru iphepha lakho lasekhaya ukuze usoloko ukwazi ukufunda ngokukhawuleza iileta zakho kwaye ubaphendule, sicebisa ukuba ...
indlela yokubuza umbuzo kwi-mail.ru
ezaposwa ngomhla 15.08.2017 28.08.2017
ungawubuza njani umbuzo kwi-mail.ru Apha - sele ubuzile umbuzo wakho wokuqala)) Kuya kufuneka ucofe iqhosha u "buza", elisentloko eblue yeprojekthi)) emva koko bhala kwangoko kwibar yomxholo ...
Imibuzo ye-54 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,884.